Iinketho zeNtengiso yeNtengiso yePropathi yeNdawo kwi-RealtyWW - I-Real Estate Blog
Iinketho zeNtengiso yePropathi yeNtengiso yePropathi kwi-RealtyWW
EyeKhala 15, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Sikwabonelela ngeenkonzo ezithile ezihlawulelwayo intengiso ye-premium kwizigaba ezikhethekileyo kwaye uludwe lwenkqubo kwiwebhusayithi yethu.
Uluhlu lodweliso. Ukuba unayo iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba kwaye ufuna ukuba uluhlu lwakho lushicilelwe ngokuzenzekelayo kwi-RealtyWW nakulo lwethu amaqabane ewebhu Olu khetho lukuwe! Yedwa kuphela I-30.00 USD ngenyanga Inkqubo yethu iyakujonga ukondla kwakho kwe-xml yonke imihla ukungenisa iintengiso ezintsha kwi-akhawunti yakho yeRealWW. Olu khetho lufumaneka kuphela kwiipropathi zepropathi (aziyi-portals, agregators, classifieds iwebhusayithi njl.). Uluhlu lwento yokuvumelanisa iza simahla kunye nesicwangciso sobhaliso olo ingafumaneka apha. Iinkcukacha ezithe kratya ingafumaneka apha
Uluhlu lokushicilela ixabiso linokuxhomekeka kudidi olukhethiweyo kunye nabasebenzisi isicwangciso sokuthenga, kodwa isimahla kwiimeko ezininzi.
Isimo sePremiyamu kulapho iintengiso zifakwe iileyibhile kunye nophawu lweprimiyamu kwaye zibonakale ziphezulu kuneentengiso zasimahla kwiziphumo zokukhangela. Oku kukhuthaza ukuthengisa okukhawulezileyo. Ixesha lokukhetha linokuba. Ukuze wenze iprimiyali yakho, kufuneka uhlawule umrhumo. Intlawulo ekhoyo kolu khetho yile: I-1.00 USD ngeyure nganye ye-24. Cinezela ukuphuma
Ukumodareyitha kokundwendwela. Ababhali abangabhaliswanga kufuneka bahlawule umrhumo omncinci wokumodareyitha - 30.00 USD . Unokuba ngumbhali obhalisiweyo kuphela emva kokupapashwa kokuqala. Cinezela ukuphuma
okwenyaniWW Julayi 15, 2016